Iifowuni ze-WordPress zeWordPress: Ulawulo kunye nomxholo | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 2, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukusukela ngokuhlaziya ibhlog yam kunye nokubeka WordPress kwiAmazon S3, Ndikwazile ukususa iiplagi zokugcina i-caching. Iiplagi zokwenza i-caching zenze gwenxa xa kuthelekiswa nokutyhala yonke imifanekiso yam kwi-S3. (Ibhili yam yenyanga yokuqala: $ 0.50).
Ndiyaqonda ukuba i-caching inokucinezela ukusebenza okungakumbi kwindawo yam… kodwa iyakundivimba ekuhlaziyweni kwesiza ngokwezifiso ze-iPhone, iBlackberry kunye nezinye izixhobo eziphathwayo. Umcimbi kukuba undwendwe olunye lunokutyelela iphepha kwizixhobo eziphathwayo, liyabanjwa, kwaye umntu olandelayo aboniswe ngohlobo olufanayo oluphathwayo kwisikhangeli sabo esipheleleyo. Ukugcina i-Caching kunye nemixholo eguqukayo ayidibani kakuhle.
Iplagi yokuqala endiyifumeneyo yokulungiselela kakuhle imixholo yazo zombini i-iPhone, iBlackberry, kunye nezinye izixhobo eziphathwayo Ushicilelo lweWindowsPress plugin.
Le iplagi yaphuhliswa ngu Isihlwele Esithandayo. Ndivavanye iplagi kwi-iPod Touch kunye neBlackberry yam kwaye zombini ezi mbono ziyamangalisa. I-Kudos kubaphuhlisi bale plugin yokwandisa umbono kunye nokuhamba kwazo zombini i-Safari kwi-iPhone okanye kwi-iPod Touch kunye ne-Blackberry kunye nezinye izixhobo.
Inqaku elinye ekufakweni kwale plugin, lifuna ufakelo olwahlukileyo kuninzi lweeplagi. Kuya kufuneka kuqala ulayishe umxholo kulawulo lwemixholo, emva koko ulayishe kwaye usebenze iplagi. Ngombulelo, ababhali bade bakwazise xa uyifaka ngokungachanekanga. 🙂
Ulawulo lwe-WordPress ye-iPhone
Enye iplagi enomdla ye-iPhone endiyifumeneyo WPhone. I-WPhone iyakuvumela ukuba ulawule iWindowsPress ngokupheleleyo ngaphakathi Iphaneli yokulawula eyenzelwe iSafari kwi-iPhone okanye kwi-iPod Touch. Kupholile ngokwenene!
Khange ndiyifakele le plugin kuba ndihlala ndenza 'ukucwina' phambili nganye yezithuba zam, kodwa nina bantu nifuna ukulunga kwe-iPhone WordPress, oku kubonakala ngathi kuyiplagi enkulu!
Njengoko iinkqubo zolawulo lokuqukethwe ziyaqhubeka nokuvela, ndiyathemba ukuba abaphuhlisi babandakanya isikhangeli esisebenzayo kunye nokudityaniswa kwezixhobo eziphathwayo njengenxalenye yesicwangciso sabo. UCarl Weinschenk unenqaku elihle elichaza iimfazwe ezizayo zesikhangeli.
Nge Opera Imfono mfono ekhutshelwe ngaphezulu kwamaxesha angama-40 ezigidi kunye ne-iPhone ngoku ebala i-0.19 yepesenti yokukhangela kwihlabathi liphela… ukwenziwa kweselfowuni kuya kuba yinto elunge ngakumbi kukhuphiswano kungekudala!
tags: I-plugin ye-iphoneUmxholo we-iphoneUmphathi wegamaumxholo wegama
Ishishini lakho kunye nokuThengisa njengoMlambo
Juni 1, 2011 ngo-3: 46 AM
Le ndawo igcwele ulwazi olubalulekileyo kubaphuhlisi be-iPhone kunye nabasebenzisi. Ndiqinisekile ukuba uninzi lwabo batyelele le ndawo baya kuyithanda. Siyavuyisana nomlawuli kunye nomnini wale ndawo. Oku kuyakunika ulwazi ngakumbi kuphuhliso lweshishini le-iPhones.